WTO ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး ကနေဒါနိုင်ငံအစည်းအဝေးသို့ တောင်ကိုရီးယားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး တက်ရောက?? - Yangon Media Group
WTO ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး ကနေဒါနိုင်ငံအစည်းအဝေးသို့ တောင်ကိုရီးယားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး တက်ရောက??
ဆိုးလ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ – တောင်ကိုရီးယားကုန်သွယ် ရေးဝန်ကြီးသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ် ရေးအဖွဲ့ (WTO) အစည်းအဝေး သို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခက်ကြုံနေရသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေးသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီး၏ရုံးက အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ကင်ဟွန်ချောင်သည် ကနေ ဒါနိုင်ငံ အော့တဝါ၌ အောက်တို ဘာ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်တို့တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၃ နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် မည်။ ယခုအချိန်တွင် ကုန်သွယ် ရေးကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာ ကွယ်ရေး မူဝါဒကြီးထွားကာ စိန်ခေါ်လျက် ရှိနေသည်ဟုဆိုသည်။
ဝန်ကြီးသည် နိုင်ငံစုံဥပဒေ အခြေခံကုန်သွယ်ရေးစနစ်ဆွေး နွေးမှုတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ် ပြီး WTO ၏ကြီးကြပ်မှုကဏ္ဍနှင့် ပဋိပက္ခတရားစွဲဆိုမှုစနစ်တိုးတက် ရန် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးစက်မှုနှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနက ပြောသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံက တောင်ကို ရီးယား၊ သြစတြေးလျ၊ ဘရာဇီး၊ ချီလီ၊ အီးယူ၊ ဂျပန်၊ ကင်ညာ၊ မက္ကဆီကို၊ နယူးဇီလန်၊ နော်ဝေ၊ စင်ကာပူနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့ အား အစည်းအဝေးသို့ ဖိတ်ကြား ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် တရုတ်တို့မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ် ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြသည်။ ၄င်း တို့အား WTO ပြန်လည်ပြုပြင် ရေးအစည်းအဝေးသို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ ခြင်းမရှိဟုဆိုသည်။